“Muuse Biixi, waxaan ku aqaanaa oo aan markhaati ka ahay in uu yahay nin talladda wanaagsan qaata, anigana hore ayuu”… siyaasi Xasan Ciise | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Siyaasi Xasan Ciise Jaamac, ayaa xisbiyadda mucaaridka ah kula taliyay in ay isaga hadhaan hadaladda xanafta leh ee ay weli ku sii daba taagan yihiin natiijadii doorashadii madaxtooyadda ee lagu kala calaf qaaday.
Waxaanu mucaaridka gaar ahaana xisbiga Waddani ugu baaqay in aanay ku deg deign dhaliisha xukuumadda cusub oo muddo bilk a yar jirtay, isla markaana ay dhaliisha mucaaradadu ku fiican tahay marka ay xukuumadu muddo dhawr sanadood ah xukunka hayso.
Siyaasi Xasan Ciise Jaamac, ayaa sidoo kale xisbiga Waddani xasuusiyay in siyaasiyan ay wanaagsan tahay in xukuumad kastoo dhalata mudadda hore la garab gallo, isla markaana wixii tallo ah ee ay siinayaan ay si hoos ahaan ugu gudbiyaan
Balse aanay wanaagsanayn in iyadoo xukuumadu maalmo uun jirtay ay hadana warbaahinta u mariyaan waxyaabo ku haboonaa in ay si ka duwan sidaasi ugu sheegaan. Waxaanu yidhi “Doorashadii madaxtooyadda waa tii lagu kala nasiib qaaday, qolooyinka mucaaridka ah waa kuwii ogolaaday natiijadii doorashadda.
Xukuumad kastoo timaada ama cid kastoo maamul hogaaminaysa oo timaada, ma inta hore mise inta danbe? Inta danbe waa la naqdin karaa oo wax baa laga sheegi karaa, laakiin lixda bilood ee u horaysa dawlad kastaa waxay u baahan tahay in la garab gallo.
Dawlad kastoo timaadaa waxay xaq u leedahay mudadda hore oo dhan in loo nasteexeeo, in la waaniyo oo inta aan warbaahinta laga dhaliilin, in si hoos ahaan ah wax loogu sheego. Asalkaba mucaaradadu wax dumin ma aha, waa wax toosin”.
Geesta kale siyaasi Xasan Ciise, in madaxweyne Muuse Biixi uu ku yaqaano nin talladda wanaagsan qaata, isagoo ku guubaabiyay nin kastoo tallo nasteex ah haya in uu madaxweynaha u gudbiyo.
“Muuse Biixi, waxaan ku aqaanaa anigu oo aan ka markhaati ahay in uu yahay nin talladda wanaagsan ee nasteexa ah qaata. Aniga-na hore ayuu tallo iiga qaatay, shirkii dib-u-habaynta SNM ee Baligubadle oo uu isagu shir-guddoominayay ayuu iga qaatay.
Nin kastoo tallo nasteex ah hayana waxaan leeyahay ku dhiiro oo ula tag. Haddii sidii aan ku aqaanay uu yahay Muuse, wuu qaadan doonaa” ayuu yidhi Xasan Ciise Jaamac, oo maanta warbaahinta kula hadlay gurigiisa magaaladda Hargaysa.
Dhinaca kale Xasan Ciise, waxa uu baaq u diray madaxweyne Muuse Biixi oo uu ugu baaqay in ay waajib ku tahay sidii uu ummadda reer Somaliland u midayn lahaa, isla markaana u bogsiin lahaa xanaftii ka dhalatay doorashadii iyo rebshadihii ka danbeeyay.
Xasan Ciise, oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Xukuumadda uu Muuse Biixi hogaaminayo iyo xisbiga Kulmiye, waxaa mar kasta waajib ku ah oo ay talladooda iyo fiilkoodaba had iyo jeer ku salaysnaato, midaynta ummadda. Waxaana umadda lagu midayn karaa cadaalad iyo walaalnimo daacad ah, waxaan ahayn ummadda laguma midayn akrro”.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Madaxweynuhuna wuxuu ku balan qaaday maalintii la dhaariyay in uu bogsiiyo nabaradii doorashadii madaxtooyadda ka dhashay iyo dadkii ku dhintay mudaharaadyadii ka danbeeyay.
Waxaanan madaxweynaha xasuusinayaa in shaqadiisa kowaad ay tahay bogsiinta wax allaale wixii dhibaato ah ee ka dhashay doorashadii”.